U LIVE Games - लेख लेख्नुहोस् र प्रति दृश्य पैसा कमाउनुहोस्।
अद्वितीय सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्
खेल र एस्पोर्टहरूका लागि
प्लेटफर्म र पैसा कमाउनुहोस्!
लेख लेख्नुहोस् र प्रति दृश्य पैसा कमाउनुहोस्।
सुरु गर्नुहोस्अनुप्रयोग खोल्नुहोस्
U LIVE खेलहरू एक खेलहरू र स्पोर्ट्स प्लेटफर्म हो जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले स्ट्रिमहरू, पोष्ट समीक्षा, गाईडहरू र वाकथ्रुहरू सुरू गर्दछन्। यहाँ व्यक्तिले आफ्नो अनुभव पनि साझेदारी गर्छन् - पोष्ट सल्लाह र कोड दुबै लेख र भिडियोमा।
हामी प्रतिभाशाली लेखकहरू खोजिरहेका छौं जुन उनीहरूको आफ्नै अनुपम सामग्री सिर्जना गर्न तयार छन्। हामी प्रति दृश्य भुक्तान गर्छौं र सशुल्क लेख पोष्ट गर्न पनि अनुमति दिन्छौं। आगन्तुकहरूले प्रति दृश्य $ ०.०4 सम्म तिर्छन्।
खेल सामग्रीमा कमाउन U LIVE खेलहरूको सम्भावना प्रयोग गर्नुहोस्
हामी धेरै मोनेटाइजेशन विधिहरू अनुमति दिन्छौं: तपाईं नि: शुल्क लेख पोष्ट गर्न सक्नुहुनेछ र दृश्यमा कमाउन सक्नुहुन्छ वा तपाईंको सामग्री दर्शकहरूको लागि भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ। निष्क्रिय आय प्राप्त गर्न हाम्रो सम्बद्ध कार्यक्रम प्रयोग गर्नुहोस्।
पोष्ट हेर्नको लागि भुक्तान
U LIVE तपाईंको सामग्रीको प्रत्येक views० दृश्यहरूको लागि भुक्तान गर्दछ जुन दर्शकहरूको लागि निःशुल्क हो।
कपिराइटरहरूलाई आमन्त्रित गर्नका लागि पुरस्कृत
हाम्रो प्लेटफर्ममा अन्य लेखकहरूलाई आमन्त्रित गर्नुहोस् र उनीहरूको आयबाट १०% पाउनुहोस्।
सदस्यता मार्फत पाठ मुद्रीकरण
विशेष सामग्री सिर्जना गर्नुहोस् र सदस्यता मार्फत यसलाई नि: शुल्क बनाउनुहोस्। तपाईं मासिक सदस्यता को मूल्य छनौट गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
खोज इञ्जिन मार्फत मुद्रीकरण
हाम्रो पार्टनर बन्नुहोस्, प्रयोगकर्ताहरूलाई U LIVE मा आमन्त्रित गर्नुहोस् र प्लेटफर्ममा खरीदहरूबाट %०% पाउनुहोस्।
हामी विविध सामग्रीमा कामना गर्छौं
यहाँ हामी खेलहरू र एस्पोर्टहरू - खेल र हार्डवेयर समीक्षा, واکथ्रुहरू, गेमरहरूको लागि सल्लाहहरू र एस्पोर्ट टूर्नामेन्टहरूको बारेमा पोष्ट प्रचार गर्छौं।
उच्च-गुणवत्ता पोष्टहरू अधिक कमाउन मद्दत गर्दछ
संलग्न फोटोहरू वा vids र तपाईंको पोस्टको आकर्षक वर्णनले अधिक दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्दछ र तपाईंको आय वृद्धि गर्दछ।
प्रत्येक coins००० सिक्का $ १ मा विनिमय गर्नुहोस्। न्यूनतम फिर्ता रकम - १० डलर।
भिसा वा मास्टरकार्ड, Bitcoin वालेट, Sepa र Bitsafe खाताहरूमा पैसा निकाल्नुहोस् वा चलानीहरू (भुक्तानी बिलहरू) सिर्जना गर्नुहोस्।
कुनै चार्जब्याक्स छैन - U LIVE Fit ले रकम फिर्ताको जोखिम लिन्छ।
हामीलाई जाँच गर्नुहोस् र आज कमाउनुहोस्!
गोपनीयता नीतिफिर्ती नीतिप्रयोगका सर्तहरूबारेमासमर्थन